Eyaziwa kuwo wonke umntu, isoya, esetyenziselwa ukutya njengomveliso wokutya ozimeleyo, kunye nesongezelelo kwezinye iimveliso, inegama elinye - iifama ze-oilseed oil. Iipropati ezisebenzayo zeesyayi ziyisihloko seengxabano ezininzi phakathi kwezesayensi ezininzi. Kule nqaku, siya kuzama ukucacisa ngokubanzi iinkcukacha zeziphumo zemveliso.
Abantu abanokunyamezela kwiiprotheni, ngokukodwa, iiprotheni zezilwanyana, kunye nabangenalo ithuba lokutya ubisi, iimveliso eziqulethe iifayili zeoli zaseTshayina ziyimfuneko. I-Soy inokusebenza njengemveliso yokutya kulabo banomdla okanye banesifo sikashukela. Ku luncedo ukuyisebenzisa kwaye njengesiqhelo sokukhusela kwezi zifo.
Kwizigulane ezinegazi legazi, i-atherosclerosis, i-cholecystitis engapheliyo, i-arthritis, izifo ezahlukahlukeneyo, i-soy nayo iyimveliso ebalulekileyo. Ku luncedo kwisifo senhliziyo esischemic.
Iifama ze-oleaginous zaseTshayina zineeprotheni (40%), amafutha (20%), i-carbohydrate (20%), amanzi (10%), umlotha (5%) kunye ne-fiber (5%). Iqulevonoids, efana ne-estrogens, kwaye iyimfuneko yokuthintela olo hlobo lomhlaza njengomxhomekeke kwi-hormone. I-Soy nayo iqulethe i-genestein, enokuthintela ezinye iintlobo zesifo somhlaza kunye nesifo sengqondo. Ukuphuhliswa kwamathumba kunciphisa i-phytic acid.
Iimpawu ezifanelekileyo kunye nezonyango ze-soy.
Ipropati ebaluleke kakhulu ye-soy kukuba iqulethe iiprotheni ezifana kakhulu kwixabiso lesondlo kunye nexabiso lokunondeza kwiiprotheni zendalo. Ioli ye-soya ine-lecithin yayo, i-vithamini B, i-E, i-choline, izinto ezikufutshane neentlanzi zamapilisi, amaminerali ahlukeneyo.
I-Choline kunye ne-lecithin bayakwazi ukubuyisela impembelelo kwiiseli zesigulane kunye neeseli zobuchopho. Ummandla wabo womsebenzi kukukhumbula, ukugxininisa, ukucinga, isondo kunye nomsebenzi wemoto, ukulawula i-cholesterol egazini, ukuthatha inxaxheba kwi-metabolism yamafutha.
I-Soy ibonwa njengomkhiqizo ophungula inkqubo yokuguga, njengoko inceda umsebenzi womzimba kwinqanaba elincinane, kwaye unzima nezifo ezininzi.
Imveliso equkethe i-soy iyachaswa kubantwana, kuba iiflavones eziqulethwe kuzo zivimbela inkqubo ye-endocrine yabantwana kwaye ingakhokelela ekuphuhlisweni kwezifo kwi-thyroid gland. Ingozi kumzimba womntwana kunye ne-phytoestrogens, kuba amantombazana asetyenziswayo asongela ukuqala komjikelezo wokuya esikhathini, kunye namakhwenkwe - ukunciphisa ukukhula ngokomzimba. Ukutya okunomsoco ekubunjweni kwabo kunokubangela ukuphazamiseka kwabantwana.
Awunakudla isoya kunye nabantu abanezifo kwintsimi ye-endocrinology, kuba ii -oflavones ezikhankanywe sele zikwazi ukunciphisa ukuveliswa kwama-hormone, ezisongela iintlungu ezahlukeneyo, ukuzithemba kunye nobuthakathaka obukhulu.
I-Soy iphinde ichazwe kwiimeko ze-urolithiasis, njengoko i-salts ye-oxalic acid kule mveliso inokuchaphazela ukubunjwa kwamatye kwizintso. Abhinqa abakhulelweyo ngenxa yobuninzi bezinto ze-soya ezifana nokubunjwa kuma-hormone, akufuneki ukuyisebenzisa.
Ezinye izazinzulu zithi kukho izakhiwo zesoya ezifaka isandla ekulahlekeni kwindleko kunye nokunciphisa umthamo wengqondo. Baphinde bathi i-soy eqinisweni yokuba ikhawuleza ukuguga komzimba iminyaka emihlanu, ngenxa yokokuba ukujikeleza kwegazi kwingqondo kuphukile kwaye isifo se-Alzheimer siphula. Ngokukodwa, ugqirha weZiko loPhando lwezeMpilo, eliseHawaii, eLone White, lithetha oku. Oku kwenzeka, ngokombono wakhe, ngenxa ye-phytoestrogens, ephazamisa ukukhula kweeseli zengqondo. Yintoni engaqhelekanga, kuba i-phytoestrogens icetyiswa kubafazi emva kwemashumi amathathu njengendlela yokunciphisa ukuguga.
Iingcali zenzululwazi kwihlabathi azikafiki ngoluvo olufanayo malunga nomonakalo okanye inzuzo yesoya. Abanye bathi bayakwazi ukwenza imimangaliso, kwaye banceda kakhulu, abanye-ukuba iimpahla ezingekho phantsi kwalo mveliso zininzi kakhulu.
Mhlawumbi yonke ingxaki kukuba ngoku kukho ezininzi zesoyibe eziguqulweyo ngokwemfuyo, kwaye zonke iinzuzo zibonakaliswa xa zisetyenziswa zendalo.
I-soybean ekhulile kwiindawo ezinokungabi naluphi uhlobo lwendalo, ayiyi kuba nayiphi na into, kuba le sityalo sinakho ukufumana izinto ezinobungozi emhlabeni, umzekelo, i-mercury, i-lead, njl.
Ukuxabisa i-soybean kwizinto eziwusizo, iJapane isenomdla omde.
Nangona kunjalo, zonke izazinzulu ziyavuma ukuba i-soy iyanciphisa kakhulu i-cholesterol. Kodwa ngenxa yale nto kufuneka udle ufike kuma-25 amagremu yomveliso imihla ngemihla. Iiprotheyini ezivela kwesoya zenziwe ngefowuni, ezingenakongezwa kwiindidi ezahlukeneyo, umzekelo, kwizityalo, isobho, njl njl.
Izibalo zithi ngamnye umfazi wesibhozo usemngciphekweni wokuba nomdlavuza webele. Iziyobisi ezisetyenziselwa ukunyanga esi sifo zifana nokwakheka kwiiflavones eziqulethwe kwi-soy, kodwa i-soy ayinayo imiphumo emibi. Iiflavones ezifanayo zinokunyusa ubude bemijikelezo yokuya esikhathini - luye luncedo ekuthinteleni olo hlobo lomhlaza, kuba umjikelezo ngamnye uhamba kunye nokukhululwa kwe-estrogen egazini, okubangela ukuba izicubu zilawule. Iigremu ezingama-40 zama-soy isoflavones ngosuku zandisa ixesha lokujikeleza ngeentsuku ezine.
Ngesipopho sesisu, amaninzi amabhinqa aphethwe ngumlilo oshisayo kunye ne-osteoporosis. I-pea ene-oleaginous pea iqukethe i-calcium kunye ne-tooflavones, ephucula imeko yabasetyhini kunye nokukhusela ukuphuhliswa kwe-osteoporosis.
I-Lecithin, equle kwi-soy, inako ukutshisa amafutha aqokelela esibindi.
I-Soy ikhiqizwa ngeendlela ezahlukeneyo: ingaba inyama ye-soya, ubisi lwe-soy okanye iintlobo ezininzi zee-additives kunye nokudibanisa iiflavones ezicocekileyo. Ezi zongeziweyo zichasene ngokuhlukileyo, kuba akukho namnye onokukwazi ngokuqinisekileyo ukuba iinkqubo ze-tumor ziqala emzimbeni. Kukulungele ukwenza ngaphandle kwee-sausages kunye neprotheni ye-soy, nangona kunjalo, kungcono ukuwafaka ngaphandle kokutya ngokupheleleyo.
Yiluncedo kakhulu ukusebenzisa i-soy yemvelo, ngakumbi iqukethe i-fibre, eyimfuneko yokukhusela umdlavuza wekoloni.
Sekude kube ngumqondiso wokutya okunempilo. Nangona kunjalo, abaninzi abayisebenzisi le mveliso ngenxa yengcamango ethile. Nangona kunjalo, nayiphi na inkcazo ingatshintshwa, kubaluleke kakhulu, ukulungiselela kakuhle umveliso.
Ngoko, unganokugcoba inyama ye-soybean ngamanzi abilayo, uze uyifake, uze uyipheke. Unokucima inyama ye-soy nge pepper, i-anyanisi kunye ne-seasonings, kunye nesitya sokutya ukupheka i-pasta okanye iphariji.
Esikhundleni sokuba ubisi rhoqo kunye nekhefu, ungongeza i-soy kwikhofi. Ngendlela, wongezelela kwisobho, unokufumana umbala omhle wesitya.
Iinzuzo zeenkukhu kunye nenyama
Iipropati eziwusizo zamalenti
Isaladi yePatato "iRosemary"
Eyona nto ithengisa ngaphandle
I-Tortellini kunye ne-sausage kunye ne-tomato sauce
I-Fashionable TOP-4: Iibhola zebusika zasebusika 2016-2017 (ifoto kunye nemikhwa)
I-baked casserole kunye nebhekoni